Igbo, John: Lesson 011 - Ndị nnọchiteanya Sanhedrin jụrụ Baptizim (Jọn 1:19-28) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 011 (The Sanhedrin questions the Baptist)
NKEBI NKE 1 - NDỊ NA-AHỤ NKE NDỊ ỌHỌRỤ (Jọn 1:1 - 4:54)
B - KRAỊST NA-EKWU NDỊ Ọ BỤ N'ỤLỌ NHỌ NKE NDỊ ỌZỌ (Jọn 1:19 - 2:12)
1. Ndị nnọchiteanya Sanhedrin jụrụ Baptizim (Jọn 1:19-28)
19 Nka bu àmà Jọn, mb͕e ndi-Ju siri na Jerusalem zigara ya ndi-nchu-àjà na ndi Livai ka ha jua ya, si, Gì onwe-gi bu onye? 20 O we kwuputa, ọ gọghi kwa agọ: ma o kwuputara, si, Mu onwem abughi Kraist. 21 ahu. ya, "Gini kwa? Gì onwe-gi bu Elaija? Ọ si, Abughi m. Ọ si, Gì onwe-gi bu onye-amuma? Ọ si, É-è.
Aghaghachi mere na ndagwurugwu ndagwurugwu Jọdan, lekwasị anya na Baptizim. Otutu puku mmadu abughi ihe di iche iche site n'ugwu di elu site n'osisi uzo di omimi. Ha rutere Baptist ka ha wee nụ olu nke onye amụma a, ma mee ya baptizim maka mgbaghara mmehie ha. Ọtụtụ mmadụ anaghị abụ ndị na-amaghị ihe, dị ka ndị mpako na-eche mgbe nile, ma ha nwere agụụ na agụụ maka nduzi Chineke. Ngwa ngwa, ha nwere ike ịmata ike na ikike n'aka ndị nwere ya. Ha achọghị ịnụ banyere ememe na iwu, kama ha chọsiri ike izute Chineke.
Ndị òtù Sanhedrin, bụ ụlọikpe okpukpe kasị elu nke ndị Juu, maara banyere mmalite a. Ha zipụrụ ndị nnọchiteanya nke ndị ụkọchukwu na ndị enyemaka siri ike, bụ ndị e ji egbu anụ. Ha ga-ajụ onye Baptizim ajụjụ, ka ọ bụrụ na ọ pụtara na ọ na-ekwulu na ha nwere ike iwepụ ya.N'ihi ya, nzukọ a n'etiti Baptizim na ndị nnọchiteanya nke Sanhedrin bụ ndị nkịtị na ndị dị ize ndụ. Onye ọkwọrọikọ John kpọrọ ndị ikom a na-abịa site na Jerusalem ndị Juu. Na aha a ka o na-ekpughe otu n'ime isiokwu nke ozioma ya. N'ihi na n'oge ahụ echiche ndị Juu bụ onye nkịtị na-ede akwụkwọ banyere Iwu ahụ, nke jupụtara n'ịgba aghara na anyaụfụ, nke mere na Jerusalem ga-abụ ebe mmegide nke Mmụọ nke Kraịst. Ọ bụghị ndị Agba Ochie n'ozuzu, ma ndị ụkọchukwu, karịsịa ndị Farisii, bụ ndị iro na-eche nche nke okpukpe ọ bụla nke na-ezere atụmatụ na ịchịkwa ha. Nke a bụ ihe mere ha ji kpebie iji ọnyà ha tụgbuo Baptist ahụ.
"Onye ka ị bụ?" bụ ajụjụ mbụ ha gwara Jọn, bụ ndị ìgwè mmadụ na-anụ ọkụ n'obi na-ege ya ntị nke ọma. "Ònye nyere gị ikike ka ị kwuo okwu? Ị nụla Iwu na nka mmuta okpukpe? Ị chere na Chineke nyere gị ọrụ, ka ị na-ahụ onwe gị dịka Mezaịa?"Jọn Onye Na-eme Baptizim hụrụ aghụghọ nke kpatara ajụjụ ndị a ma ọ ghaghị ụgha. Ọ buru na ọ gāsi, Mu onwem bu Kraist ahu, ha gāma ya ikpé, ewe tub͕ue ya; ma ọ bụrụ na ọ ga - asị, "Abụghị m Mesaịa ahụ," ndị mmadụ ga - ahapụ ya ma ghara ile ya anya dị ka ihe dị mkpa. Ụmụ Abraham n'oge ahụ nọ na-ata ahụhụ n'ihi ihere nke ịbụ ndị Rom na-achị. Ha choro maka Onye nzo puta, onye gaewep ta ha na ibu nke ndi Rom.Onye Baptist ahụ kwupụtara n'ihu ọha na ọ bụghị Kraịst ahụ abụghị nwa Chineke. O kwenyeghi aha nke megidere nduzi nke Mo Nso. Ọ họọrọ ịnọgide na-adị umeala n'obi na ikwesị ntụkwasị obi n'òkù ọ na-akpọ, na-atụkwasị obi na Chineke ga-eme ka ozi ya guzosie ike.
Mgbe ha nyesiri ya aka, ndi nnọchiteanya ahu gara n'ihu ijua ya, "Gì onwe gi bu Ịlaịja?" Aha a na-ezo aka na nkwa ahụ dị na Malakaị 4: 5, ebe Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na tupu nbịa nke Mezaịa ahụ, onye amụma ga-apụta na mmụọ na ike nke onye amụma a ma ama bụ Ịlaịja, onye wetara ọkụ si n'eluigwe na ndị iro ya, onye nwuru anwu nke Chineke kwere. Onye ọ bụla weere dike a dị egwu dịka onye ndú nke mba ha. Mana John wedara onwe ya ala, obu ezie na n'eziokwu o bu onye amuma ahu ekwere nkwa, dika Kraist mechara gbaa àmà banyere ya (Matiu 11:14).Ndị nchụàjà wee jụọ ya ma ọ bụ onye amụma ahụ e kwere ná nkwa, onye onye Moses buru n'amụma na ya ga-enye ọgbụgba ndụ ọhụrụ ma dị uku (dịka ya onwe ya) (Deuterọnọmi 18:15). N'elu ajụjụ a bụ ọchịchọ ha ịmata onye zigara ya ikwu okwu dị ka onye amụma. N'ihi ya, ha nọgidere na-ajụ onye ọ bụ na ikike o nwere, na ma ọ bụ site na mkpughe ma ọ bụ maka onwe ya.
Onye Baptist ekweghị itinye onwe ya n'ọrụ na ọkwa nke Moses. O choro ka ya na Chineke gbaa ohuru n'enyeghi ya ikike ime ya. Ọ chọghịkwa iduga ndị ya iji merie ndị agha. Ọ nọgidere na-ekwesị ntụkwasị obi n'ọnwụnwa ahụ ma ghara inwe nganga ma ọ bụ nganga. N'otu oge ahụ, ọ maara ihe ma ọ bụghị aza ndị iro ya karịa okwu ndị dị mkpa. Ọ dị mkpa ka anyị tinye ụkpụrụ ndị a n'ọrụ ná ndụ anyị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka iziga John Baptist na ụwa anyị, nwoke nke na-adịbeghị mpako. Na-agbaghara anyị mpako nke iche na anyị ka ukwuu ma dị mkpa karịa ndị ọzọ. Kụziere anyị ka anyị ghọta na anyị bụ ndị ohu na-erughị eru nakwa na naanị gị bụ nnukwu.
Gịnị bụ ebumnobi nke ajụjụ ndị nnọchiteanya si n'ụlọ ikpe kasị elu nke ndị Juu jụrụ?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)